Apple weputara watchOS 3.1.1 beta na tvOS 10.1 beta 2 maka ndi mmepe | Esi m mac
Apple weputara watchOS 3.1.1 beta na tvOS 10.1 beta 2 maka ndị mmepe
N'ehihie Monday na Spain jupụtara n'ụdị beta maka ndị mmepe na oge a nke nọrọ maka echi bụ nsụgharị maka Mac, macOS Sierra. Nsụgharị nke nsụgharị iOS 10.2 Beta 2, tvOS 10.1 Beta 2 na watchOS 3.1.1 Beta 2 weputara taa. Maka ugbu a, ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ọrụ ma ọ bụ na ị nọ na mmemme beta nke Apple, ụdị ọhụrụ ahụ ga-apụtarịrị iji wụnye, yabụ lee ntọala ahụ n'ihi na ụdị ọhụrụ ahụ adịla na tebụl.
Ọhụrụ version maka Apple Watch na-agbakwunye ole na ole ndozi tụnyere ndị gara aga version ma ọ bụ n'ihi na ugbu a ọ dịghị ihe na-egosi na mpụga nke mmezi ụdị nsogbu na obere ndozi nsogbu nke gara aga version. Nke a watchOS 3.1.1 beta na-agbakwụnye na ọ bụrụ na ndakọrịta na emoticons nke emejuputara na mbipute nke iOS 10.2 nke mere na obere obere gburugburu ga-emechi.
N'ihe banyere tvOS 10.1 beta 2 ndozi na-nwetụrụ ndị ọzọ na-akpali n'agbanyeghị na-agbakwunye ahụhụ fixes na obere ahụhụ fixes ka ọ na-emejuputa atumatu "otu ntinye" ahụ nke na-enyere ndị mmepe ohere ịnweta ihe niile ha nyere nkwekọrịta site n'aka onye ọrụ. N'oge a nhọrọ a dịịrị naanị ndị ọrụ na United States.
Yabụ anyị enwetala otu mmelite ndị nrụpụta na ngwaọrụ ndị a ma olile anya echi bụ ntụgharị nke Mac na beta maka macOS SierraỌ bụ ezie na ụdị ọhụrụ ahụ nwere ike ịgbakwunye mgbanwe ole na ole karịa mmezi ahụhụ na nsogbu na ụdị nke ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Apple weputara watchOS 3.1.1 beta na tvOS 10.1 beta 2 maka ndị mmepe
Ọrụ ọhụụ maka Apple Spain na Portugal
Akwụkwọ ọhụrụ na Pixar na Jobs. Iji Pixar na Gafee: Njem m na-atụghị anya ya na Steve Jobs iji mee akụkọ ntụrụndụ